लघुसंस्मरण : उपरीमाथि थुपरी- गाेविन्दबहादुर कुँवर
बुधबार, असोज ७, २०७७ Sarangi Radio Network
शनिबार, भदौ २७, २०७७ सारङ्गी न्युज
सानैमा सुनेकाे हाे याे भनाइ । उतिखेर उति यसकाे अर्थ बुझेकाे थिइनँ । समय क्रममा बुझ्दै आइयाे । सानामा हामीले पढेका कति कुराहरू र सुनेका कति कथाहरु पछि पछि बुझिँदाे रहेछ ।
१. पटक पटक चितुवा आयाे भन्ने गाेठालाेकाे कथा दुई कक्षामा के बुझ्नु ! रमाइलाे मात्र मानियाे हाेला ।
२. एक गिलास खाएपछि, मैनाजस्ताे हुन्छ । दुई गिलास खाएपछि सुगाजस्ताे हुन्छ । तीन गिलास खाए पछि बाघजस्ताे हुन्छ । त्याेभन्दा धेरै खाए पछि सुङ्गुरजस्ताे हुन्छ । अनि नालीकाे फाेहरमा लट्पटिन्छ ।
३. माटाका भाँडा बाेकेर पहाड चढेका भाँडा व्यापारीहरू शिखरमा पुग्नै लाग्दा सबै जाे पुग्छ पालैसँग, ऊ खुसीले उफ्रेर रमाउँछ र असन्तुलित भएर भारी पल्टाउँछ। यसरी काेही पनि भाँडा सहित शिखर पार गर्न सक्दैनन् ।
४. काशीमा शास्त्र पढेर आएका वैयाकरण, तर्कशास्त्री, ज्याेतिषी र आयुर्वेदाचार्य गरी चार जनाले बाटाेमा भात पकाउने तयारी गर्छन् । ज्याेतिषीले ढापमा चुलाे जाेर्न जुराउँछ ।आयुर्वेदवालाले सबैभन्दा पथ्यकर भनेर निमकाे पात तरकारीका लागि ल्याउँछ । तर्कशास्त्रीले पातमा घ्यूकाे भुटन ल्याउँदै गर्दा बाटाेमा तर्क गर्छ यदि पातकाे आधारमा घ्यू छ भने घ्यूकाे आधारमा पनि पात हुनुपर्छ भनेर घाेप्ट्याउँछ । चिसाे चुल्हाेमा बल्ल बल्ल भात छड्कन्छ र वैयाकरणले भात छड्केकाे आवाजकाे अर्थ लगाउन खाेज्छ र कुनै पनि अर्थ नलागेपछि निरर्थक वस्तुकाेे काम छैन भनेर भात घाेप्ट्याइदिन्छ ।
५. काशीबाट घर फर्केकाे अर्काे विद्वान् पण्डित बाटाेमा पर्ने मसानघाटमा गधा देखेर "राजद्वारे श्मसाने च य तिष्ठति स पण्डित" भनेर शास्त्रमा लेखेकाे सम्झन्छ र गधालाई बन्धु सम्झेर अँगालाे हाल्छ ।
साहित्यमा उत्कृष्ट याेगदान गरेका कतिले राज्य वा जनस्तरबाट पाँच पैसाकाे पनि पुरस्कार प्राेत्साहन पाएनन् । कतिले नेपालमा उम्रेका जति सबै पुरस्कार पाएका छन् । आजीवन अवसर पाएका छन् ।
६. बुढाे भ्यागुताले हात्ती यत्राे छ भनेर भुँडी फुलाउँदा फुलाउँदा भुँडी नै फुटाएकाे कथा वा बाेटेलाई नपढेकाेमा तिम्राे आधा जीवन व्यर्थ गएछ भन्ने विद्यावारिधिवाला र आँधी आउँदा पाैडिन जानेका छाै भनेर बाेटेले साेध्दा छैन भन्ने विद्यावारिधिवालालाई बाेटेले त्यसाे भए तिम्राे पूरै जीवन व्यर्थै भयाे भनेकाे कथा र यस्ता अनेकाै सन्देशमूलक कथा, लाेककथाहरू छन्, जसकाे अर्थ पछि पछि बुझियाे ।
उपरीमाथि थुपरी अर्थात् जाेसँग जे उरुङ छ उसलाई त्यै अझ थपिदिनु । अनि जाेसँग रत्ति छैन, ऊ सधैँ त्यत्तिका त्यत्तिमा सीमित हुनु । अहिलेकाे सम्धी काण्डले नयाँ कीर्तिमान् कायम गरेकाले बढी चर्चा पायाे ।
सासू काण्ड, ज्वाइँ काण्ड, श्रीमती काण्ड कति छन् कति यस्ता काण्डहरु ।
तर याे प्रवृत्ति सबैतिर थियाे, छ र रहनेछ । साहित्यमा उत्कृष्ट याेगदान गरेका कतिले राज्य वा जनस्तरबाट पाँच पैसाकाे पनि पुरस्कार प्राेत्साहन पाएनन् । कतिले नेपालमा उम्रेका जति सबै पुरस्कार पाएका छन् । आजीवन अवसर पाएका छन् ।
राजनीतिमा त्याग गरेका कति निष्ठावान्, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूले कहिल्यै अवसर पाउँदैनन् तर छट्टुहरुले पटक पटक अवसर पाउँछन् । बाह्र-तेह्र पटक मन्त्री हुनेहरू पनि छन् ।
इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकहरू, शिक्षकहरूलगायत समाजसेवामा लागेकाहरू र राष्ट्रका हरेक क्षेत्रमा इमानदार एवम् समर्पित भएर खटेकाहरूले बिरलै अवसर पाउँछन् ।
प्राय: जाे सत्ता र शक्तिकेन्द्रका नजिक जाे छन् वा जसले चाकरी गरेर रिझाउन सक्छन्, तिनैलाई उपरीमाथि थुपरी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा केही फरक हाेला तर कुनै सत्ता पनि यसबाट अपवाद छैन, खास गरी हाम्राे देशकाे सन्दर्भमा ।
गभर्नर, याेजना आयाेगकाे उपाध्यक्ष, मन्त्रीपछि विकसित देशकाे राजदूतकाे पर्खाइमा हुन्छन् । मानाैँ ती पद र जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति मुलुकमा अरू काेही छैनन् ।
अलि वर्ष अघिसम्म हामीभन्दा कम विकसित रहेकाे छिमेकी राष्ट्र भुटानमा समेत मन्त्री हुन सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएकाे हनुपर्दाे रहेछ । प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेछ ।
पालमा कुन नेता प्रधानमन्त्री भए कुन मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ र प्राय: एउटै मान्छे पटक-पटक दाेहाेरिइराखेकाे हुन्छ ।
चीनमा त धेरै पहिलेदेखि विज्ञता हेरेर मन्त्री नियुक्त गरिने प्रचलन रहेछ ।
बेलायताकाे चुनावमा पार्टीले जिते अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हुने र हारे पार्टी अध्यक्षले राजिनामा दिने प्रचलन छ ।
नेतृत्वमा सिर्जनशीलता शून्य सधैँ एउटै व्यक्ति रहे पछि नयाँ कुलमानहरू जन्मिन पाउँदैनन् । मुलुकले अग्रगति लिने दूरदर्शी दृष्टिकाेण भएका त्यागी नेतृत्वबाट हाे । महत्त्वपूर्ण पदहरुमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने प्रणालीले सक्षम नेतृत्व परिवर्तनकाे लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्दछ ।
हामी कहाँ सात आठ कक्षा पढेका पनि अर्थमन्त्री हुन्छन् । हुन खाेज्छन् र धाेती पाटाे फेरेर बस्छन् । स्वास्थ मन्त्री हुन जनस्वास्थ्यमा विज्ञता गरेकाे व्यक्ति हुनुपर्दैन, जस्ताे व्यक्ति पनि हुनसक्छ ।
विज्ञान प्रविधि मन्त्री कस्ताे मान्छे हुनुपर्ने हाे ? एक पटक मिर्जा दिल साद वेग भन्ने पात्र विज्ञान प्रविधि मन्त्री भएका थिए । पदमै रहदाँ हाे कि अलिपछि हाे उनी अपराधी समूहबाट राजधानीमा गाेली प्रहारबाट मारिए । उनकाे पृष्ठभूमि नै त्यस्ताे थियाे ।
नेपालमा कुन नेता प्रधानमन्त्री भए कुन मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ र प्राय: एउटै मान्छे पटक-पटक दाेहाेरिइराखेकाे हुन्छ ।
त्याग, याेग्यता र क्षमताकाे आधारमा निष्पक्ष रूपमा सबैलाई अवसर दिने परिपाटी र पद्धति नबसेसम्म सम्धी काण्ड दाेहाेरी राख्छ र केही सत्ता र शक्ति केन्द्रकाे नजिक रहेकाहरूलाई सधैँ उपरीमाथि थुपरी हुन्छ ।
सत्ता र शक्ति केन्द्रबाट टाढा रहेकाहरुकाे हात पुर्पुराेमाथि हुन्छ ।
शनिबार, भदौ २७, २०७७, १४:५१:००
लमजुङकी एलिना मगरकाे रहस्यम मृत्यु ५ घण्टा पहिले